Aluminium Fishing Boat Ampodio | Outboard Boat Motor Repair
Ho toy ny fanomezana fisotroan-dronono ho an'ny tenany, Dadabe nividy vaovao, fisaka ambany, aluminium sambo mpanjono. Aluminum dia somary fitaovana vaovao ampiasaina amin'ny sambo indray avy eo. Ity sambo Noheverina ho ny "farany sy lehibe indrindra" ao amin'ny 1966. Up ho io hevitra io, dia nanao ny sambo fanjonoana amin'ny gitara. Ny sambokely tamin'izay 16 tongotra ny lavany, ela be noho ny ankamaroan'ny sambo ny andro, fa ilaina amin'ny fanjonoana lalitra, ka olona afaka hamono amin'ny fisarahana ampy mba tsy nahazo andalana Feno tahotra. Heveriko fa ny dadabeko koa ny tao an-tsainy nanjono amin'ny ankizy sy ny grandkids araka ny fianakaviany dia nitombo. Izany koa maivana be noho ny sambo hazo tranainy, mazava loatra fa afaka hanomboka sy nampiditra izany rehetra izany irery. Ity sambo, miaraka amin'ny 1963 Evinrude 3hp maotera sy Silvertrol trolling maotera, nanao ny Irvin Travis manidina sambo mpanjono izay nianatra trondro sy notezaina teo.
Mpanarato manidina ny raibeko ary ny jono manidina irery ihany no karazana jono nataonay. Tena nankafiziko ny fotoana nandaniako tamin'ny jono niaraka tamin'ny raibeko, ny raiko ary ny mpianakavy hafa. Nampianatra antsika lesona maro tamin'ny fiainana izy, ary mihevitra ny tenako ho tsara vintana tokoa aho nanana raibe toy izany. Taorian'ny nahafatesany tamin'ny 1981, izaho sy ny raiko dia tsy afaka nitondra fientanam-po mba handeha hanjono mandritra ny folo taona. Ny sambon'i Dadabe dia simba nanakaiky ny trano fivarotana tao an-tranoko nandritra ny 30 taona ho avy. Niverina nanjono indray izahay sy i Dada, saingy miaraka amina sambo vaovao sy milamina kokoa ary manaraka lalana. Nandritra io fotoana io no nifaneraserantsika tamin'ny Indianapolis Fly Casters izay nanampy anay hiverina hanjono. Notohizanay tamim-pifaliana ny fomban-jono manidina any amin'ny farihy Indiana sy ny lavadavaka stripper rehefa nitombo ny fianakaviako. Farany, nahazo sambo mpanjono roa Gheenoe izahay izay mahazaka olona dimy manjono.
Lohataona ity, dia nanomana lehibe lavitra fanjonoana tamin'ny Ray, Dadatoa sy ny Zanany, anaka, zana-drahalahiny, ary tsy ela dia ny ho zanakao-in-lalàna izay Te-hanao an-lalitra mpanjono alohan'ny manaiky ho any amin'ny fianakaviana. Izay nanao mety fito anay, eny, tonga ny mahafantatra fa isika nila sambo iray hafa. Nandeha hatramin'ny ilany ny nalatsak'i sy nisosa lasa 4 santimetatra ny kesika fanjaitra dia nitarika avy ny antitra Dadabe sambo mpanjono. Ny sambo tao mahatsiravina endrika, rehefa nipetraka for 30 + taona. Ny hazo, ka lo daholo. Ny horonan izay nitana ny hazo rehetra miara-dia efa harafesina, ny sambo dia mafy voaloto avy amin'ny kesika fanjaitra sy ho amin'ny tany. Inona no mety ho azoko aoka Dadabe ny sambo simba ny toe-javatra toy izany? Tamin'izay aho nanapa-kevitra ny hamerina azy.
Ny raiko sy Dadatoa Samy Curt ny 80 ny. Tsy fantatro hoe firy ny fanjonoana kokoa fitsangatsanganana isika rehetra no miara-dia indray sambo ity, dia ny mahatsiaro manidina rehetra fanjonoana in, lasa rehetra ny zava-dehibe kokoa amiko. Nanapa-kevitra ny handoavana izany ny tsara indrindra vitako, ary gaga ny olona tamin'ny dianay.
Tsy nandray ahy tokony ho tapa-bolana, miasa eo amin'ny orana mivatravatra ho karavasy ho endrika sambo ity. Ny sambo tao endriny ratsy toy izany izay nanapa-kevitra ny fasika fipoahana sy ny hoso-doko izany. Tsy mbola niasa tamin'ny fasika blaster alohan'ny fa afaka mindrana ny iray ampiasaina miaraka amin'ny rivotra compressor. Rehefa manala ny sambo rehetra ny kitay hazo sy vy harafesina horonan, I fasika poaka aty hidina any niteraka aluminium. Nataoko hiala vitsivitsy raibeko customizations izay efa toy ny nanasongadina sy aft fihantonany mba clip amin'ny tariby trondro harona, ary ny famohana manokana teo amin'ny lafiny roa fandefasana solon'ny tanana, noho izany dia ho fantatsika mbola ny sambo.
Nampiasa tranofiara azo ampiasaina aho ho toy ny toeram-piasana ary nameno ny sambo feno rano hahitako ny famoahana, izay misy maro. Nosoloiko rivets marokoroko sy malalaka maromaro niaraka tamin'ny voanjo sy kofehy efa harafesina izay nampiasainy hanoloana ny rivet. Taorian'ny fametahana ireo rano, nampiasa sprayer hosodoko aho ary nandoko ny lafiny anatiny sy ivelany tao anaty sambo, namela ny ambany tsy niova satria manana ny tasy tany am-boalohany sisa tavela avy amin'ny rano fantsakana. Sarotra tamiko ny nahita "loko sambo fanjonoana" tao amin'ny fivarotana enta-mavesatra sy fandokoana mahazatra ao amin'ilay faritra. Nandeha tany amin'ny John Deere teo an-toerana aho ary nividy galona loko traktera John Deere, izay noheveriko fa tsara ho an'ny sambo mpanjono, ary marina ny nolazaiko! Namboariko ny lampihazo ary napetraka teo alohan'ilay sambo ny lampihazo ary nampiasa hazo kely araka izay tratrako aho mba tsy hampisy lanjany be loatra. Nosoloiko koa ilay hazo teo amin'ny transom.
Nanapa-kevitra ny hanao fanatsarana aho. Nanana vola, fitaovana ary kojakoja izay tsy nananan'ny Raibeko tamin'ny fotoanany aho. Nanampy seza telo ahazoana aina vaovao aho, izay tena faran'izay tsara raha oharina amin'ireo ondana sambo tsotra izay nananantsika taloha. Izaho no namorona ny seza misy ahy. Raha mijery akaiky ny sary ianao, dia hitanao fa ny seza dia afaka miovaova hatrany amin'ny lafiny iray mba hitazomana ny sambo handanjalanja. Io no noforoniko manokana. Ny seza dia nivadika tamin'ny swivels haingana.
Raibeko tany am-boalohany nanan-janaka roa 6 volt vatoaratra ny trolling maotera izay, ka nataony tao afovoan-sambo ambadiky ny seza afovoany. Dia nanao toy izany koa afa-tsy iray ihany 12 volt bateria. I nihazakazaka ny "jumper tariby" avy any afovoan-sambo ho any ambanin'ny seza aloha sy nampiasa horonan sy washers mba fitoerana teo ho an'ny moto trolling fahefana tariby mampifandray. Aho nanampy ny float mampandeha bilge paompy, zavatra iray izay ho avy amin'ny mora raisina raha toa ny sambo dia nanomboka indray mitete. Tsy nisy na oviana na oviana bilge paompy teo amin'ny sambo taloha.
Mbola nanana ny tany am-boalohany Evinrude 3hp Lightwin indray maotera izay taona vitsivitsy lasa izay, sy ny Silvertrol trolling maotera izay nanadio ka napetrany teo an-tsambokely indray. Nanapa-kevitra fa te hametraka ny anaran'ny raibeko ny sambo ka dia nanana taratasy fametaka mitombo natao ka izay nanao hoe: "Irvin Travis, ny lehibe 'stripper lavaka' manidina mpanjono - Spurgeon Indiana", izay noheveriko dia tsara hetra.
Rehefa afaka adiny iray eo ho ny Nankafizinay koa ilay sambo, olona iray nanolo-kevitra nandao ny sambo toy ny tranombakoka tapa aho, nefa nanapa-kevitra ny hanomboka azy io ary aoka ny zanako, Tommy, sy ny zanany lahy-in-lalàna, Alex maka azy avy ho amin'ny hariva fanjonoana. Rehefa Nanantena, niasa tsara ny sambo. Ny raiko nandà tsy handeha an-tsambokely izy, satria tsy ampy ny fifandanjana dia tao an-taona ny zandriny, ary nisafidy ny fiarovana ny sambo vaovao. Curt ka dia nalaiko ny sambo ka tsapako fa tsy maintsy mianatra indray ny ela hadino hahay lalitra jono raha tsy tipping ny sambo. Curt, ary izaho dia lavitra manoatra noho izahay amin'ny tanora taona sy tsy maintsy mitandrina. Tamin'ny farany, dia tratra tamin'ny mahafinaritra ary nanana fanjonoana avy izany tsambokely indray, na dia mamela ny vorona alika an-tsambokely hita ho be loatra mety fotsiny.